Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaara Hiiraan
Posted by admin on March 21 2011 12:09:46
Isniin 21,Maarso 2011(HSOL)- Dagaalo maalmahani ka socday gudaha Hiiraan ayaa hakad galay maxey tahay sababtu?
Isniin 21,Maarso 2011(HSOL)-Kedib dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ay maalmahani gudaha Hiiraan ka wadeen koox u muuqaal eg Xizbul Islaamkii bur buray oo fadhigoodu yahay xadka Hiiraan iyo Ethiopiya ayaa hakad galay kedib markii ay dagaaladaasi faraha ka laabteen ciidamadii ugu badnaa ee halkaasi ku sugnaa kuwaasi oo loogu yeero ciidamada Hiiraan.
Dhacdadii ugu xiisaha badneyd ayaa aheyd kedib markii kooxdii dagaalka ku deg degeysay farta loogu fiiqay magaalada Belet weyne laguna yiri hadaadan ciidamada Hiiraan ka mid noqon karin waataas magaalada Belet weyne hadaad qabsan kartaan,kedibna dantii waxey ku qasabtay iney iskood iskaka joojiyaan dagaaladii awalba natiijadooda la ogaa. shacabka ku dhaqan magaalada Belet weyne iyo nawaaxigeeda ayaa iyagu ku kalsoon dagaalada ay soo qaadaan ciidamada reer Hiiraan, maadama aysan ciidamadaasi wax dhib ah u geysaneyn shacbaka amaba aysan jid gooyo u dhiganeyn oo ay ujeedadoodu tahay xoreynta Hiiraan kedibna shacbaku ay aayahooda ka tashadaan.
Waxaa kale oo ay kooxdaasi joojiyeen idaacadahii ay beenta u sheegayeen oo ay ku lahaayeen magaaladaan qabsaneynaa iyo waanu ku dhaw nahay iyo wax lamid ah. howlaha ciidanka iyo arimaha guud ayaa waxaa hada hagayo ciidmada reer Hiiraan oo ku xiran shacabka magaalada iyo waxgaradka reer Hiiraan ee Mogdisho ku sugan. Inta badan kooxaha ka dagaalama gudaha Hiiraan ee huwan magacyada aan ka turjumeyn danaha reer Hiiraan waxey ku dhamaadaan fashil kuwa hada colaada ka hurinaya Hiiraana waxey u muuqaal eg yahiin ururkii Xizbul Islaam ee bur buray waxba kama duwana markaad hab dhaqankooda aragto ayey leeyahiin shacabka magaalda Belet weyne.
Dhinaca kale ciidamo daacad u ah Shabaab oo dhawaantan gadooday kedib markii dhaqaalo yar oo bishi hal mar lasiin jiray laga gooyey dhibaato ku haya musaafurka ku safra wadada dheer, dhalinyaradani ayaa dhawr ISsbaaro dhigtay inta u dhaxeysa magaalada Bulo Burte iyo Tuulada Fiidow iyagoo shacabka musaafurka ah dhibaato ku haya.
Warar hada inaga soo gaaraya Tuulada Bacaad oo qiyaastii u jirta magaalada Belet weyne 8 KM in ay kooxda Shabaab ku qaatay dagaal kedib markii shacabka tuulada qaarkood si hoose ugu yeerteen Shabaab iyagoo sida la sheegay isfahmi waa uu dhax maray shacabka Tuulada iyo ciidamo maalmahani ku sugnaa halkaasi, kedibna ay Shabaab halkaasi ku dileen dhawr qofood iyagoo gaxeystay gaari biyaha lagu daabulo iyo ninkii waday.shacabka Tuulooyinka ayaa inta badan sidan ula dhaqma markey arkaan ciidamo aan sidan magaca Hiiraan. ma ahan markii ugu horeysay ee ay shacabka ku nool Tuulada Bacaad qaarkood ugu yeeraan Shabaab ciidamo tuuladooda soo gala.